Umdlali wezintandokazi uMaxim Averin akazange aphumelele kuphela emfanekisweni wephoyisa elihle. Imva nje "i-Glukhar" izisa izindaba zakamuva kubalandeli bayo kumanethiwekhi omphakathi. Ku-microblogging ku-Maxime Averin Instagram, abasebenzisi abambalwa abasayinwe - kuphela abantu abayizinkulungwane ezingu-93, kodwa bangabalandeli abazinikezele kakhulu bomdlali.
U-Maxim Averin uvame ukutshela ngomsebenzi wakhe kubhulogi yakhe, kodwa ngezinye izikhathi ungathola izithombe ezithintekayo zezingane zomdlali phakathi kwezithombe ezivela ezokuvakasha namakhonsathi.
Isithombe ku-Instagram Maxim Averin ngesitayela se-"nude" esikhishwe emoyeni
Namuhla uMaxim wanquma ukujabulisa abalandeli bakhe ngesithombe esingavamile. Labo abajwayele isithombe esihlukumezayo somlingisi othandekayo, bamangala ngendaba yakhe ethintekayo, ekhombisa ngisho nompristi ohloniphekile. Esithombeni, u-Averin uthumele namhlanje kuwebhu, akanawo unyaka.
Esikhathini sokuhlaziya esithombeni, u-Maxim wabelane ngezinkumbulo zakhe zezinsana zobuntwaneni bakhe:
Khuluma nomama. Ngineminyaka emine ubudala futhi nginesithakazelo kukho konke.
- Mama, lezi zindinganiso ezimbili zisho ukuthini kimi ngezinyawo zami?
- Lokhu kungukuzalwa kwakho.
- Futhi kungani? Phela, akudingekile ngokuphelele. - Kanjani? Ngokushesha uzolahleka! Futhi ngizokuthola kulezi zibazi ezimbili zokubeletha!
Umama wami omuhle!
Kulungile wonke umuntu!
Isithombe se-Maxim Averin omncane sasithokozisa ababhalisile bomculi. Ngendlela, abaningi bacabanga ukuthi eminyakeni engamashumi embalwa edlule wayengakaze ashintshe nhlobo:
Yeka i-pretty pretty
I-Karapuz ... ayizange iguquke "
UKonstantin Khabensky okwesibili waba papa
U-Ivan Okhlobystin nomkakhe balinde ingane yesikhombisa
I-Kurban-Bayram 2016 eMoscow, eTatarstan, eTajikistan - lapho kuqala nokuphela. Siyakuhalalisela nge-Kurban-Bayram ngesiTurkey, isiTatar, isiRashiya nezithombe
Ukucindezeleka: inkinga eneminyaka engu-40 ubudala owesifazane
Isobho se-isitshalo seqanda nesitshalo seqanda nama-lentile
Iziphi izifo ezingenza ukulahlekelwa kwesisindo?
Ubhiya Bokwehlobo Oluhlelekile
I-Hepatitis C nokuncelisa
Shish kebab amnandi
Ukushada nomuntu ohlukanisile
Ubisi lwezinyoni ngaphansi kwe-cherry jelly